Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo - ဝီကီပီးဒီးယား
"Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo" ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနည်းကျ မှန်ကန်သည့် ဝါကျတစ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤဝါကျသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၌ ဝေါဟာရအနက်မပြတ်သားမှု ၊ ထွေပြားမှု သဘောတရားမှနေ၍ ရှုပ်ထွေးပြီးနားလည်ရခက်သည့်စာကြောင်းများကိုဖန်တီးရန် homonyms (စာလုံး/အသံတူ အနက်ကွဲ) နှင့် homophones (အသံတူ အနက်/စာလုံးကွဲ) များကို မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြတင်ဆက်လေ့ရှိသည့် ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှစ၍ Dmitri Borgmann ဆိုက သူ၏ Beyond Language စာအုပ်တွင် ဝါကျအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ နယူးယောက်မြို့၊ Buffalo တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခဖြစ်သည့် ဝီလျံ ဂျေ ရက်ပေါ့ပါ က ၁၉၇၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် သုံးခဲ့ပြန်သည်။
ဤဝါကျတွင် ပုဒ်ဖြတ် ပုဒ်ရပ်မရှိပါ။ ယင်းတွင် buffalo ဆိုသည့် စကားလုံးအား အဓိပ္ပါယ် ၃မျိုး အသုံးပြုထားည်။
နာမ်အထူးပြု စကားလုံး (noun adjunct) - နယူးယောက်ပြည်နယ်မှ (ဒုတိယအကြီးဆုံး) buffalo မြို့။
နာမ်: အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် buffalo အား ကျွဲ အဓိပ္ပါယ်ရရှိသည်။ bison (အမေရိကန်ပြောင် သို့မဟုတ် မြောက်ဥရောပ အမွေးရှည်နွားရိုင်းကြီး) ဟူ၍လည်း သိကြသည်။
ကြိယာ - တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုခြောက်လှန့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ခြမ်းခြောက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော "buffalo" ဟူသောစကားလုံး။
၎င်းဝါကျအား အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။
"Buffaloa buffalon Buffaloa buffalon buffalov buffalov Buffaloa buffalon" နာမဝိသေသနအား အေ(a) နာမ်အား အင်န်(n) နှင့် ကြိယာအား ဗွီ(v) ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ပို၍ ရှင်းလင်းစေရန် အခြားစာကားလုံးများ၏ အကူအညီဖြင့် နားလည်နိုင်သည်။
Buffalo buffalo (ဘဖလိုမြို့မှ ကျွဲများ သည်) [that] Buffalo buffalo buffalo (ဘဖလိုမြို့မှ ကျွဲများက အနိုင်ကျင့်လိုက်သော) buffalo Buffalo buffalo (ထိုမြို့မှ ဤတရိစ္ဆာန်(ကျွဲများ) ကို အနိုင်ကျင့်လျှက်ရှိသည်။)
[Buffalo from Buffalo] that [buffalo from Buffalo] buffalo, also buffalo [buffalo from Buffalo].
Buffalo City - အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ဘတ်ဖလိုမြို့
Buffalo - ကျွဲ
Buffalo (verb) - အနိုင်ကျင့်သည်။ ခြိမ်းခြောက်သည်။
စာကြောင်းအာ မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုကြည့်လျှင် "ဘတ်ဖလိုမြို့မှ ကျွဲများ အနိုင်ကျင့်လေ့ရှိသည့် ဘတ်ဖလိုမြို့က ကျွဲများသည် ဘတ်ဖလိုမြို့က ကျွဲများကို ခြိမ်းခြောက်ပါသည်" ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
↑ Borgmann၊ Dmitri A. (1967)။ Beyond Language: Adventures in Word and Thought။ New York, NY, USA: Charles Scribner's Sons။ OCLC 655067975။
↑ Rapaport၊ William J. (2012)။ A History of the Sentence 'Buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.'။ December 7, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rapaport, William J. 19 February 1992. "Message 1: Re: 3.154 Parsing Challenges Archived 19 October 2009 at the Wayback Machine.". linguistlist.org. Retrieved on 14 September 2006.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Buffalo_buffalo_Buffalo_buffalo_buffalo_buffalo_Buffalo_buffalo&oldid=641875" မှ ရယူရန်
၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။